Firxadka Kooxda Jwxo-shiil, oo Matooro Beero Lagu Waraabinayo Gubay – Rasaasa News
Sep 10, 2010 beer gub, dadlays, dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, ONLF
Godey, [Sept 09, 2010] – Iskaashatada beeraha ee Tuulada Hilo-guduud, oo matooro ay beeraha ku waraabsan jireen ayaa waxaa shalay gubay dabley ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo ka baxayey gabalka Godey.
Matoorada la gubay oo ay tiradoodu dhantahay 6 Matoor, ayaa waxaa lahaa dad beeraley ah oo dib u dajin horay ay dawladu ugu samaysay ka dib kolkii ay abaari dhamaysay hantidii Miyaga ay ku haysteen.
Kumanaan qoys oo deganaa tuulada Hilo-guduudo ayey noloshoodu ku xidhnayd beeraha oo ay ku waraabsan jireen Matoorada ay gubtay kooxda Jwxo-shiil.
Sida ay wararku sheegayaan Kooxda ayaa u timid beeraleyda tuulada, waxayna waydiisteen in ay siiyaan lacag, hadii kalena ay ka gubayaan Matoorada beeraha u waraabiya. Beeraleyd ayaa awoodi waayay in ay bixiyaan lacag ay waydiisatay budhcadu, ka dibna waxay ka gubeen Matooradii ay nolosha dadweynaha tuulada Hilo-guduud ku xidhnayd.
Kooxda Jwxo-shiil, oo diiday nabada uu qaatay ururka ONLF, ayaa u qaybsantay labo; kuwo nabada qaata iyo kuwo dalka iskaga baxa. Kooxda dalka ka baxaysa ayaa waxay bilaabeen in ay sii jiscintaan hantida dadweynaha, waxayna hore uga dhaceen degaanka Dhanan ee gabalka Shabeele beesha Wayteen Geel. Waxaa kale oo ay geel ka dhaceen dadna ka dileen beesha reer Amaadin, meel u dhaw degaanka Xamaro ee gabalka Nogob.
Kooxda Jwxo-shiil, oo horay dhibaatooyin ba,an oo naf iyo maalba leh u gaystay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, gaar ahaan dadka reer miyiga ah, ayey kooxda amartaa waxay degan yihiin dalalka reer galbeedka.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa waxaa saaran gudo iyo dibadba waajib muqadas ah, oo ay kaga difaacayaan dadweynaha masaakiinta ah kooxda qawlaysatada ah ee Jwxo-shiil.
Beelaha Somalida Ogadeeniya ee degan gudaha Ogadeeniya ayaa go,aansaday in ay si cad ula dagaalamaan kooxda Jwxo-shiil, ee ay dabada ka riixayaan xoogaga shisheeye.
Beelaha Tolomoge iyo Cabdile, ayaa waxay dareemeen xili hore dhibaatada ay kooxda Jwxo-shiil, ku samaynayso dadweynaha dega gabalada Shabeele, Nogob iyo Qoraxeey, waxayna bilaabeen in ay iska celiyaan.
Waxaa iyaduna dhawaan ku dhawaaqday beesha reer Isaaq oo hore u taageeri jirtay kooxda Jwxo-shiil in hada wixii ka dambeeya ay dagaal kala hortagi doonto, oo ayna garab u noqon doonin.